10 Akanaka Kwazvo Akare Maguta Ekushanyira Pasi Pose | Save A Train
musha > Travel Europe > 10 Akanaka Kwazvo Akare Maguta Ekushanyira Pasi Pose
Nguva yekuverenga: 7 maminitsi(Last Updated On: 06/02/2021)
Wakakomberedzwa neakanaka kwazvo hunhu, isina kubatika nenguva, vari 10 yemaguta ekare anoyevedza kushanyira pasirese. KuEurope kwese kusvika kumaguta eChina anonakidza, rwendo rwuno ruchazara nengano kubva kuma medieval times kusvika kunguva dzedu.
1. Most Beautiful Old Towns To Visit In Europe: Civita Di Bagnoregio, Itari
1200 zera, nekwakatangira iyo yakadzokera muzana ramakore rechitanhatu, Civita di Bagnoregio ndiyo yechinyakare zvakanyanya guta rakanaka muEurope. Uchawana imba iyi mudenga 110 km kubva kuRoma, achizorora pachikomo. Kana iwe ukashanyira iri rakanaka guta dombo muzhizha, iwe ungangosangana ne 100 vagari vanodzoka kuzonakidzwa nemaonero epiki wedunhu reViterbo.
Uyezve, iwe uchaona zvichinyanya kufadza kuona kuti guta rakachengeta iro Ages akitekicha pashure 2 hondo dzenyika, uye huwandu hwekukanganiswa kwemakomo. saka, kuedza kukuru kuri kuitwa kuchengetedza ichi dombo reItaly, kuzvichengeta kuti zvirege kufa. saka, isati yanyangarika iwe unofanirwa tora chitima kuenda kuViterbo, kubva kuRoma Termini pazororo rako rinotevera reItaly.
Roma kuViterbo Ine Chitima
Siena kuna Orvieto Nechitima
Arezzo kuOrvieto Nechitima
Perugia kuenda kuOrvieto Nechitima
2. Akawanda Akanaka Mataundi Ekare Ekushanyira Pasi Pose: Rothenburg Old Town, Jerimani
Paunenge uri kuGerman iwe unofanirwa kufamba munzira yeRomantic Road, munhu 40 maminitsi’ kutyaira pakati misha inoyevedza muGermany. Ikoko zvakare kwaunowana imwe ye 10 maguta ekare akanaka kwazvo kushanyira pasi rese, rothenburg.
Rothenburg ob der Tauber munhu mashiripiti Ages dhorobha muBavaria, Jerimani. Dzayo-hafu timbered pastel-mavara edzimba anoramba asina kubatika nenguva kumashure kwakachengetedzwa-kwakachengetedzwa kwemadziro eguta. Guta rekare rinonakidza rakawana zita raro nekuda kwenzvimbo yaro pamusoro perwizi rwaTauber, nzvimbo ine hungwaru yemacelts, pakutanga kwezana ramakore rokutanga C.E. Plonlein waRothenburg, Markt mraba, quaint alleys, uye Castle Gardens inoita kuti ive rimwe remaguta ekare anoyevedza kushanyira muEurope, uye munyika.
Berlin kuenda kuRothenburg Ob Der Tauber Ine Chitima
Stuttgart kuRothenburg Ob Der Tauber Ine Chitima
Munich kuRothenburg Ob Der Tauber Ine Chitima
Frankfurt kuenda kuRothenburg Ob Der Tauber Ine Chitima
3. Yakanaka Kwazvo Guta Rekare Kushanyira Pasi Pose: Fenghuang MuChina
Phoenix Yakare Guta, Fenghuang nderimwe remaguta ekare akachengetedzwa kwazvo muChina. Paunopinda muguta rakanaka, kuona kunoshamisa kwemabhiriji, temberi, uye upenyu pamusoro pemvura huchazviratidza kwauri, pakati pemiti inorema uye zvakasikwa munzvimbo dzakakomberedza.
Nenhoroondo ye 400 makore, ndeveMing uye Qing dynasties, Fenghuang, ndiyo imwe yenzvimbo dzisingakanganwiki muChina. Chimwe chezvinhu zvinonyanya kufadza uye zvinonakidza nezve iri Rakare guta muChina nderekuti vagari veguta, iyo Miao uye Tujia madzinza madiki, vachiri chengetedza pre-yemazuva ano tsika uye hupenyu mudzimba dzekare dzemapuranga.
4. Nanjing Guta Rekare, China
Rusvingo rweguta rekare kwazvo munyika, Nanjing, iri paRwizi Yangtze. Nanjing mumwe 4 misoro yekare muChina. Pamusoro pe, Nanjing nderimwe remaguta ekare anoyevedza kushanyira pasirese. Izvi zvinokonzerwa nemadziro eguta anoshamisa achakamira akatenderedza guta, kuzvichengeta zvisina kubatika nenguva uye nhoroondo.
zvisinei, maonero anoshamisa kwazvo eNanjing ari panguva yehusiku. Mushure merima, guta rose rakabatidzwa, uye iyo inoshamisa Confucius Tembere inotonyanya kushamisa. Pamusoro pe, unogona kushanyira zvimwe zvikwangwani kubva kuimba yeMing, muzana ramakore rechi14. Semuyenzaniso, Sun Yatsen's Mausoleum.
5. Most Rakanaka Old Town To Visit In Europe: Avignon, Furanzi
Guta rekare rinoshamisa reAvignon muProvence rakavakwa muzana ramakore rechi14. Iri guta rinoshamisira raive kumusha kwevaPope, uye haufanire kunge uri wekutenda kwechiKristu, kuyemura vanapapa’ gothic muzinda. Mushure mekuyemura muzinda iwe unogona kuenda kuchikepe murwizi rwakanaka rweRhone sezvo Avignon achizorora kumahombekombe kuruboshwe, kana tarisa kune rakakurumbira Saint-Benezet bhiriji, kubva muzana ramakore rechi12.
Guta rekare rakanyatsovanzwa kuseri kwenzira dzakachengetedzwa uye 39 nharire. Pamusoro pe, kana iwe ukave uchishanyira Avignon pavhiki, uchafarira Svondo flea musika, kana munguva yezhizha, ipapo uchave nerombo rakanaka kuenda kumukurumbira Avignon theatre festival “mu” uye “kure” muna July.
Paris kuenda kuAvignon Nechitima
Nice kuna Avignon Nechitima
Marseilles kuenda kuAvignon Nechitima
6. Most Rakanaka Old Town To Visit In Europe: kushandiswa
Kudanana, fadza, uye neyekuvaka yezana ramakore rechi14, Bruges nderimwe remaguta akanakisa ekare muEurope. Guta rekare rakakurumbira reBelgium, kushandiswa chokoreti zvitoro, nzvimbo yemusika, mabhiriji, uye medieval nhoroondo yepakati inokwezva 8 miriyoni vashanyi gore rega.
saka, iwe uchanakidzwa nazvo zvakanyanya kana iwe ukafamba-off mwaka, uye sangana neyemuno 120,000 vagari. saka, vhiki refu ichave yakanaka kuti uwane iri rakanaka dhorobha rekare muBelgium uye unonyatsoyemura yakachengetedzwa-yakanaka ngano.
7. Akanaka Kwazvo Akare Maguta Ekushanyira MuChina: Luoyang, China
Longmen Grottos naShaolin tembere, chete 2 yemasaiti ayo anoita kuti guta rekare reLuoyang rive rimwe remaguta ekare anoshamisa kwazvo pasi rese. Uchawana pakati peChinese Universe Luoyang guta rekare, pakati peBeijing neXi'an, nechitima chebara.
Guta rekare reLuoyang rakamira rakamira, isina kubatwa nenhoroondo uye nekufamba kwenguva, kubva 1600 BC. saka, iwe uchafadzwa kuona iro rakakura guta gedhi rakakomberedza hupenyu hweguta. Pamusoro pe, iwe unozofamba nepanzvimbo pakafamba vatengesi vekutanga veSirik Road.
8. Yakanaka Kwazvo Guta Rekare Kushanyira Pasi Pose: Prague
Guta Rekare, sekuzivikanwa nevanhu veko, Prague Old Town, inokwezva vashanyi kubva muzana remakore rechi9. Unozotorwa moyo neguta rino rekare rinonakidza. saka, kana iwe ukawana mukana, shanyira Prague zvirinani kwevhiki. Nenzira iyi iwe unozowana zvikonzero zvakawanda iri rimwe remaguta ekare anoyevedza pasi rese.
Iyo yekare nhoroondo nzvimbo inoramba iri iyo pakati peguta, kusvikira nhasi, nzvimbo yehupenyu hwese hwetsika. Uchaona kuti vese vashanyi vanoungana vakakomberedza iyo Astronomical wachi awa rega pakati.
9. Yakanaka Kwazvo Guta Rekare Kushanyira Pasi Pose: Amsterdam
Amsterdam ndeimwe yeakanyanya dzakakurumbira maguta mu Europe, uye rimwe remadiki. Izvi zvinoreva kuti iwe unogona kufamba kuburikidza neguta rese mumazuva maviri. zvisinei, what most tourists don’t know is that this Beautiful Dutch town is one of the ancient towns in the world.
saka, zvisinei nehukuru hwayo, Guta rekare reAmsterdam rine akawanda akakosha mavara iwe aunoda vhiki kuti uwane. Guta rezana ramakore rechi13 rine mizinda yakawanda yakavanda, zviwi zverunyararo, kana iyo Oude Kerk, chivakwa chekare muAmsterdam, mudunhu dzvuku. Kupfupisa, iwe waigona kuona zvakawanda muAmsterdam kupfuura pane yechinyakare canal cruise kana iwe uine chinangwa chekutsvaga yayo tucked kure nyaya.
10. Ping Yao Guta Rekare MuChina
Inonyanya kufadza izvi nezveguta rekare Ping Yao ndiko kusanganiswa kwemasikirwo ekuvaka. Sezvaunofamba-famba mumigwagwa yekare, dzimba, temberi, uye masvingo eguta achataura nyaya dze 5 mazana emakore. Izvi zvinokonzerwa nekuti iro guta rekare raPing Yao rakavakwa muzana ramakore regumi nemana.
Kana iwe uchida nhoroondo uye unofadzwa neChina tsika, ipapo kufamba uchidzika nemugwagwa mukuru weguta unenge uri chiitiko chakajeka. Iwe unenge uri nguva-uchienda kune imwe nguva iyo Pingyao yaive yezvehupfumi nzvimbo yeChina, uye ona kuti hapana kana chimwe chakashanduka.
Iri dombo rekare rinowanikwa nyore nechitima, ingo enda kuPingyao Gucheng Railway Station, uye kubva ipapo bhazi kuenda kumagedhi eguta.
pano pa Save A Train, tichave tichifara kukubatsira kuronga rwendo rusingakanganwiki uye rwakawedzerwa kuenda ku "10 Akanaka Kwazvo Maguta Ekare Ekushanyira Pasi Pose".
Iwe unoda kupinza yedu blog positi "10 Akanaka Kwazvo Akare Maguta Ekushanyira Pasi Pose" pane yako saiti? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fancient-towns-visit-worldwide%2F%3Flang%3Dsn ‎- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)